फोक्सोलाई बचाउन यी खानेकुरा नियमित खाने गर्नुहोस - Aarthiknews
फोक्सोलाई बचाउन यी खानेकुरा नियमित खाने गर्नुहोस
एजेन्सी । फोक्सोको क्यान्सरकाबारे सचेत गराउन ’वल्र्ड लंग क्यान्सर डे’ हरेक अगस्त १ मा मनाइन्छ । संसारभर हरेक वर्ष क्यान्सरका कारण लाखौंको मृत्यु हुने गरेको छ । डब्ल्यूएचओको रिपोर्ट अनुसार २०१८ मा संसारभरि क्यान्सरले गर्दा ९६ लाख मानिसहरू ज्यान गएको थियो ।
जसमध्ये फोक्सोको क्यान्सरबाट मर्नेहरूको संख्या १७ लाख भन्दा बढी थिए । डाक्टरहरूका अनुसार खानामा उच्च फाइबर खाँदा फोक्सोको क्यान्सरको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
२ मकै : मकै वर्षामा धेरै खाइन्छ । यसमा कोलेस्ट्रोल फाइबर समावेश हुन्छ । जुन मुटु र फोक्सोका बिरामीहरूका लागि धेरै उत्तम हुन्छ । हेल्थलाइन रिपोर्टका अनुसार १०० ग्राम मकै १४.५ प्रतिशत फाइबर पाइन्छ ।
४ ओट्स : जई कार्बोहाइड्रेट र प्रोटीनको एक राम्रो स्रोत मानिन्छ । बिहानको खाजामा ओट्स खाएमा धेरै रोगहरू निको हुने अनुमान गरिएको छ । ओट्समा १०० ग्राम अर्थात् ओट्सको एक कपले शरीरलाई १०.६ प्रतिशत फाइबर दिन्छ ।
६. राज्मा : राजमा फलामको मात्रा उच्च मात्रामा पाइन्छ । जसको कारणले शरीरलाई धेरै उर्जा दिन्छ । शरीरको मेटावाँलिज्मा र उर्जाको लागि आइरन आवश्यक पर्छ । जुन राज्म खाएर पूरा हुन्छ । शरीरमा अक्सिजनको संचार बढाउन पनि राज्मले मद्दत गर्दछ । १०० ग्राम राज्मा खानेले शरीरलाई ६.४ प्रतिशत फाइबर प्रदान गर्दछ ।
७. गाढा चकलेटः कोकाको दानाबाट तयार गरिएको चकलेट एन्टी अाँक्सिडेन्टको उत्तम स्रोत हो । धेरै अध्ययनहरूमा यो प्रमाणित भएको छ कि डार्क चकलेट खाँदा स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ । साथै मुटुसँग सम्बन्धित रोगीलाई पनि सहगोग पुग्छ । १०० ग्राम डार्क चकलेटमा १०.९ ग्राम फाइबर पाइन्छ जुन फोक्सोको लागि पर्याप्त मानिन्छ ।